तपाईको हाइट पर्फेक्ट छ त ? यसरी थाह पाउनुहोस ! - Nepal Post Daily
तपाईको हाइट पर्फेक्ट छ त ? यसरी थाह पाउनुहोस !
काठमाडौँ । पुड्कोपन राष्ट्रिय पोषणको समस्या हो । यसले दिर्घकालमा देखाउने असरहरु सामाजिक तथा आर्थिक विकासका समस्याहरु हुन् । उमेर अनुसार हुनु पर्ने न्यूनतम उचाई नहुनु पुड्कोपन हो । त्यसको मापन उमेर र उक्त उमेरमा हुनु पर्ने उचाईका आधारमा गरिन्छ ।
Previous article९ महिला सहित १०२ जनाद्वारा रक्तदान
Next articleगढीमाई र सिम्रौनगढको विकास गर्न प्राधिकरण बनाउँछु: मुख्यमन्त्री राउत